Duraa duuba taatewwan fonqolcha mootummaa fashalaa'ee - BBC News Afaan Oromoo
Janaraalonnii fi aanga'oonni mootummaa olaanoon Koloneel Mangistuu gara Jarman Bahaa,GDR,geggeessuuf ganamaan buufata xiyyaaraa booleetti argaman.
Meejar Janaraal Quumillaachoo Dajanee xalayaa Jeneraal Damisee Bultoof kennamu qabatanii daandii xiyyaaraa Itoophiyaatiin gara Asmaraatti imalan.
Meejar Jeneraal Mariid Nugusee waajjira isaanii masaraa mootummaa keessatti argamu irraa gara Ministeera Ittisaatti imalanii bilbila icciitiidhaan bilbiluu eegalan.
Koloneel Mangistuun gara Jarman Bahaa imaluuf haadha warraa fi mucaa durbaa isaanii waliin xiyyaara seenan.
Koloneel Mangistuun akkuma imala eegalaniin Jeneraalonni waraanaa 11 mooraa Ministeera Ittisaa keessatti akkaataa fonqolcha mootummaa geggeessan irratti marii eegalan.
Xiyyaaricha uggurree Asmaraatti qubachiisnaa fi ni rukunna yaada jedhurratti waldhaban.
Kun Kanaan otoo jiruu Hoogganaa Qajeelcha Duula Waraanaa kan turan akkasumas sochii fonqolchaa kan qindeessaa turan Jeneraal Abarraa Abebe Ministira Ittisaa yeroo sanaa Janaraal Haayilagiyoorgisiin ajjeesuun miliqan.
Loltuu humna qilleensarraa ykn Ayyar walladii waan turaniif tarii mooraa irraan utaalanii miliqan shakkii jedhu uume.
Humni qilleensaa addaa 'Ispaartaa' jedhamuun beekamu 150 ta'u kan Kooriyaa Kaabaatiin leenji'e Xoollay irraa ka'ee dhufuun magaalaa Finfinnee buufate. Achiis naannoo Mana Poostaa marse. Boodarra gara kaampii waraanaa mashuwaalakiyaa jiruu geeffaman.
Humni addaa ykn Komaandoon lakkoofsaan 400 ta'an Birgaader Jeneraal Quumilaachoo Dajanee fi Koloneel Kaasaayee Taaddaseen durfamanii xiyyaara Antoonoov afuriin wal duraa duubaan Asmaraa irraa ka'anii Buufata Xiyyaaraa Idil addunyaa Boolee qubatan.
Ergamni isaanii warreen fonqolcha yaalaa turaniif golgaa ta'uun waajjiraalee mootummaa ijoo ta'an to'achuudha.
Ajjeefamuu Ministira Ittisaa booda garee fonqolcha mootummaa geggeessuu fi garee fashalsiisu gidduutti dubbiin eegale.
Yeros dubbii kana gar tokkotti deebisuuf gidduu deemaa kan turan Addis Tadlaa fi Dabalaa Dhiinsaa turan.
Mareen isaanii bu'aa buusuu wayita dadhabu, michuu jabaa Koloneel Mangistuu kan turan Shaambal Mangistuu Gammachuu fi Hoogganaan Tikaa yerosii Koloneel Tasfaayee Waldasillaasee mooraa ministeera ittisaa waraana birgeedii addaatiin marsiisan.
Waraanaan marfamuu isaanii erga hubatanii abdii kutatanii booda, Jeneraal Mariid Nugusee fi Jeneraal Ammahaa Dastaa wal duraa duubaan of ajjeesan.
Yaaliin fonqolcha mootummaa fashaluusaa fi namoota fonqolcha yaalaa turan keessaa Jeneraal Faantaa, Komaandar Haayilee fi Jeneraal Abarraan yeroof miliquu isaanii miidiyaan biyyalessaa ibse.
Guyyoota sadi booda Janaraal Faantaan bakka dhokatanii ba'uun harka kennan. Ji'oota muraasa erga maa'ikalaawaatti hidhamanii booda wayita miliquuf yaalanitti ajjeefaman.
Torbanoota muraasa boodammoo Janaraal Abarraa Nugusee bakka dhokatanii as ba'anii osoo miliquuf yaalanii rasaasaan addarra rukutamuun ajjeefaman.
Yaaliin fonqolcha mootummaa geggeeffamee waggaa tokko booda ,janaraalota 12tti adabbiin du'aa murtaa'e.Halkanuma sana adabbiin kun hojiirra oole.